Drafitra fampianarana: pôrnôgrafia amin'ny Internet - The Reward Foundation
Home Drafitra fampianarana maimaim-poana Drafitra fampianarana: pôrnôgrafia amin'ny Internet
Ny mampiavaka ny lesona The Reward Foundation dia ny fifantohana amin'ny fiasan'ny ati-dohan'ny tanora. Ity dia manampy indrindra ny mpianatra hahatakatra sy hanana faharetana amin'ireo voka-dratsy mety hitranga amin'ny fampiasana sary vetaveta. Ny Reward Foundation dia neken'ny Royal College of General Practitioners any London hampianatra atrikasa matihanina amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana.
Ny lesona ampianarinay dia mifanaraka amin'ny torolàlana farany an'ny Departemantan'ny Fanabeazam-pirenena (governemanta UK) “Fifandraisana fampianarana, fifandraisana ary fanabeazana ara-pananahana (RSE) ary fanabeazana ara-pahasalamana”.
Izy ireo dia azo ampiasaina ho lesona mitokana na amin'ny andiany telo. Ny lesona tsirairay dia manana andiana slide slide PowerPoint miampy ny Torolalana ho an'ny mpampianatra ary, raha ilaina, fonosana sy boky fiasana. Ny lesona dia miaraka amina horonan-tsary miorina, rohy mankany amin'ny fikarohana lehibe sy loharanom-pahalalana hafa ho an'ny famotopotorana misimisy kokoa mba hahalalàn'ireo singa ireo, azo ampiharina ary hifehezan-tena araka izay tratra.
Lesona 1: Pôrnôgrafia amin'ny fitsapana
Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia ampiasain'ny tanora, amin'ny ankapobeny ny ankizilahy, fa ny ankizivavy kosa izao.
Amin'ity lesona ity ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa dia apetraka amin'ny fitsarana isika. Mametraka ny fanontaniana izahay hoe "manimba ve ny sary vetaveta?" Manolotra porofo 8 izahay hanampiana ny mpianatra hisaintsaina ireo olana, hitsikera ny porofo toy ny mpitsara, ary hanoratra ny didim-pitsaran'izy ireo miaraka amin'ny fanjohian-kevitra. Hihaino izy ireo avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina, tovolahy iray ary tovovavy iray izay mahasitrana ireo mpidoroka pôrnôgrafia, psikology amin'ny karama amin'ny indostrian'ny pôrnôgrafia, mpamokatra pôrnika 'etika', ary ny famaritan'ny World Health Organisation ny fahasalamana ara-nofo.
Amin'ny maha-lasa azy, ny Classification of Diseases (ICD-11) Iraisampirenena momba ny fahasalamana (ICD-XNUMX) dia manambara fa ny fampiasana sary vetaveta manahirana dia azo hamarinina ho aretina miteraka firaisana ara-nofo maharikoriko ary aretina manandevo. Mandritra izany fotoana izany, ny indostrian'ny pôrnôgrafia, toy ny indostrian'ny paraky sy sigara havokavoka, am-polony taona vitsivitsy lasa izay, dia mandoa ny matihanina amin'ny fitsaboana mba handavana fa misy fifandraisana eo amin'ny fampiasana pôrnôgrafia sy karazana olana ara-pahasalamana. Miasa be amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny Internet amin'ny ankapobeny izy ireo. Izany dia mitarika fikorontanana be momba ny tena fiatraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet indrindra amin'ny tanora.
Mianara bebe kokoa ary sintomy izao
Lesona 2: Fitiavana, pôrnôgrafia & fifandraisana
Ahoana no ahitan'ny olona iray ny toetra sy ny lafiny tsara amin'ny fifandraisana akaiky?
Inona no fiantraikan'ny fahazarana mamoa fady amin'ny fanekena ara-nofo, fanerena, fanerena, fanolanana, herisetra ara-nofo ary finamanana? Inona avy ireo loza sy valisoa azo avy amin'ny fampiasana sary vetaveta? Inona avy ireo famantarana sy soritr'aretin'ny fampiasana tafahoatra?
Ny lesona dia manome tetika isan-karazany hanampiana ny mpianatra ho tonga araka izay tratrany sy hampivelatra ny fifandraisana salama mandroso.
Mianara bebe kokoa & ampidino izao
Lesona 3: Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny fahasalamana ara-tsaina
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nisy fiakarana tampoka teo amin'ny olana ara-pahasalamana eo amin'ny tanora. Ny fiovan'ny fahazarana vokatry ny areti-mifindra dia nampitombo ity fironana ity.
Ny lesona dia mijery ny fahatokisan-tena amin'ny vatana sy ny fomba ahafahan'ny tranonkala vetaveta sy ny media sosialy miteraka fampitahana be loatra amin'ny hafa amin'ny Internet. Jerevo ihany koa ny amin'ny fomba itadiavan'ny orinasan-tserasera, indrindra ny sary vetaveta sy ny filalaovana, ny fahalemena ao amin'ny ati-dohan'ny tanora hahatonga azy ireo ho mpampiasa zatra. Hitan'ny mpianatra fa tsy tena maimaim-poana ireo tranonkala maimaim-poana. Ny orinasan-tserasera dia mahazo dolara / pounds amina miliara maro amin'ny sain'ny mpampiasa, fivarotana ny angon-drakitra manokana sy ny safidiny ho an'ny tanjona dokam-barotra, pejy alaina ary fivarotana vokatra mifandraika amin'izany.
Ity lesona ity dia natao ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa saingy azo ovaina ho an'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ny tanjona dia ny hahafahan'ny mpianatra mahafantatra izay ara-dalàna sy izay olana eo amin'ny tenany sy ny hafa ary, rehefa mipoitra ny olana, dia fantaro ny fomba hikatsahana fanampiana raha vao azo atao avy amin'ny loharanom-baovao mety.
Manolotra paikady mahasoa amin'ny fampihenana ny fampiasana Internet sy amin'ny fananganana faharetana.
Lesona 4: Ny fanandramana pôrnôgrafia lehibe
Ity lesona ity dia manavao ny zava-misy sy ny antontan'isa avy amin'ny lahateny TEDx malaza indrindra, ny Fanandramana Pôrnôgrafia Lehibe hatramin'ny 2012. Hatramin'izao aloha dia 13.5 tapitrisa mahery ny fomba fijery ary voadika amin'ny fiteny 18.
Izy io dia manazava ny loza mety hitranga amin'ny filokana amin'ny pôrnôn'ny Internet rehefa mandeha ny fotoana, toy ny fihenan'ny erectile vokatry ny erectile, ary ny antony mahatonga ny adolantsento hanana fotoana lava kokoa hamerenana ny fahasalamany ara-nofo noho ny lehilahy antitra.
Ity lesona ity dia manolotra vaovao tsara miaraka amin'ny tantara fanarenana maromaro ataon'ny tanora izay mahatsapa ho salama kokoa, mavitrika kokoa, mpandraharaha bebe kokoa ary miasa mafy kokoa ary mahomby kokoa amin'ny fisarihana vady vantany vao miala amin'ny pôrnôgrafia.
Misy koa loharanom-pahalalana manampy amin'ny fampahafantarana amin'ny mpianatra raha mila fanazavana fanampiny izy ireo.